खोकना घटनाको खास कुरा ! | शहरबाट शब्दहरु
« आजबाट फेरि लेख्छु भन्ने अठोट
निर्वाचन अपडेटमा अनलाइन पत्रिका पहिलो नम्बर »
खोकना घटनाको खास कुरा !
मंसिर २, आईतबार, २०७०
आज बिहान ढिला उठियो । हिजो निद्रादेवीको काखमा पुग्दा करिब २ बजिसकेको थियो । आज उठ्ने बित्तिकै पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशन कार्यालयमा बम राखिएको खबर आयो । उतैतिर पुगियो । नियमित झैं फेसबुक, अनलाइन पत्रिकामा समाचार अपडेट गरियो ।
आज अड्डामा पनि चाँडै पुगेँ । आज कार्यालयमा वितरण शाखाका लागि दुईजनालाई नियुक्ति दिइयो । पत्रिकाको कार्यालयको लागि वेव अपलोड र पेजमेकर चलाउन सक्ने महिला कर्मचारीको खोजी गरियो । करिब एकदर्जन पुराना मित्रहरूलाई गुहारे, उनीहरू संचारमाध्यममा कार्यरत छन् । तर, कर्मचारी’bout जानकारी दिइयो, साथीहरू बुझेर खबर दिन्छु भनेर जानकारी गराए । त्यस्तै यही सिलसिलामा पुराना साथीहरूसँग सम्वादको मौका जुर्यो । करिब १० वर्षअघिका साथीहरू । जो अहिले राम्रो काममा आवद्ध छिन्, त्यस्तै कोहीभने वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेकी छिन् ।
यस्तै कार्यालयमा दिनभर रहँदा चुनावी चर्चा सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गफ भयो । साँझतिर खोकनामा भएको झडपको समाचार प्राप्त भयो । समाचारको फ्लोअप गरिरहँदा मतदाता परिचय वितरणमा झडप भएको समाचार फैलिसकेको थियो । केही संचारमाध्यमले मलाई यस’bout सोधे । ती संचारमाध्यमले प्रसारण र प्रकाशित पनि गरे । प्रकाशित समाचार
बेलुकातिर अल्का अस्पतालमा ल्याइएका घाइते प्रहरीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सिडिओ आइपुगे । भेट भयो । चुनावी दौडमा व्यस्त रहेको जानकारी दिए । त्यसपछि समाचारमा पूर्णता भएको महसुसपछि नेपाल समाचारपत्रमा समाचार पठाएँ । बेलुकातिर एक प्रख्यात राजनीतिक व्यक्तित्वले फोन गरेर संचारमाध्यममा आएका समाचारको सत्यता बुझ्दै सक्दो यस’bout सत्य समाचार दिन आग्रह गरे । आज चाँडै सुत्ने तरखरसँगै यी शब्दहरू अपलोड गरेर बिदा हुन्छु । अस्तु
This entry was posted on नोभेम्बर 17, 2013 at 3:54 अपराह्न and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.